5 Ukuzonwabisa Kwindlela Yokugubha uLitha Ngezingane
ULitha uwela ngeJuni 21 enyakatho yelizwe, kwaye ngoDisemba 21 ngaphantsi kwe-equator. Eli lixesha le-summer solstice , kunye neentsapho ezininzi, abantwana bayaphuma esikolweni, oko kuthetha ukuba lixesha eligqibeleleyo lokubhiyozela i-sabbat. Ngumhla ode kunayo yonke unyaka, abaninzi bethu badlala ngaphandle kwaye banandipha imozulu ebushushu, kwaye mhlawumbi unenhlanhla ngokwaneleyo yokubhukuda njengoko ugubha ilanga.
Ukuba unabantwana ekhaya, zama ukugubha uLitha kunye nezinye zeengcamango ezinobungane kunye neentsapho.
Phuma ngaphandle kwaye ube ne-adventure ehlobo! Iimifanekiso zeHero / i-Digital Vision / Getty
Ngokuxhomekeka kwindawo ohlala kuyo, kwaye yintoni efumaneka ngokukhawuleza kufuphi, i-summer solstice ingaba lixesha elihle lokubuyela kwimvelo. Ngaba unayo ihlathi elisondeleyo onokunyuka kulo? Kuthiwani elwandle ? Nokuba intsimi okanye i-meadow iya kwenza ... okanye yakho yangasemva yard! Cinga ngezinto ezingokwemvelo ezihambelana nommandla oza kuzwendwendwela, uze neengcamango zendlela ongayisebenzisa ngayo njengamava okufundisa.
Kwii-kiddos ezindala, zama ukuhamba ngeenqanawa kwihlathi . Qinisekisa ukuba uthathe incwadi okanye ipheflethi kunye neetrobhile zokutya ezinokutya ezinokutya ezinokuthi ungadla kwihlathi. Sebenzisa oku njengethuba lokukhangela amajikijolo asendle, izityalo zengingqi ezifana neepwpaws, okanye imifuno yemilingo .
Ukuba abantwana bakho bancinci, zama umzingeli-ukukhangela-ukukhangela amatye anomdla kunye neentonga, iipopods, i-pinecones kunye neengoma zezilwanyana.
Ngaba unxweme elisondeleyo? Cinga ukuthatha abancinci bakho ngaphandle kobuchwephesha obunxwemeni ! Hlanganisa iigoblokhwe, izibonda ze-driftwood, okanye ezinye izinto ezinomdla ongazisebenzisayo ngenjongo yemilingo.
Ukuba awunaso ixesha elininzi lokukhulula, okanye awukwazi ukufika ehlathini okanye elunxwemeni, kukho into enokuyenza enkundleni yakho. Khangela amabhathaneli , khangela izinto ezikhulayo kumyezo wakho, kwaye ubone oko unokufunda malunga nelanga njengoko uhamba phambili. Ukuba abantwana bakho bangakwazi ukuhlala ngokukhawuleza ngokwaneleyo, zama i-backout ye-backout ngexesha lobusuku obucacileyo kwaye ubukele iinkwenkwezi nenyanga.
Yibambe isiKhokelo soMhlobo
Bhiyozela ihlobo kunye nosapho lwakho. Johner Izithombe / Getty
Masijongane nayo, ngamanye amaxesha kunzima ukufikelela xa uncinci. Ubuqhetseba bokugcina abantwana abancinci abandakanyekayo kwizenzo zobuhedeni kukuba bahlale behlala-oko kuthetha ukuphinda ucingisise iingcamango zesithethe ukuze kudibanise kunye nokomoya. Sebenzisa izinto ezimnandi ukumela ezine iikota:
Umntla (Umhlaba): Ibhokisi yebhokisi, iintyatyambo ezenziwe ngobomi, umyezo wakho
EMpuma (Umoya): Amafayili, ii-pinwheels, i-hula hoops, i-swingset
Umzantsi (Umlilo): Abaqhwitha (kulula ukufumana okufanelekileyo phambi koJulayi 4), i-grill yakho, isitya esikhulu somlilo okanye umgodi
Emazantsi (Amanzi): Izibhamu ze-Squirt, iibhakethi zamanzi, i-sprinkler, ipulazi lokuhamba
Ukuba abantwana bakho banomntwana okanye abanye abaxhomekeke kwimimiselo ebomini babo, imikhosi yoTywala kwiSuku lokuBhiyozela uSuku, kwaye ibambe isiko ehlonipha ubaba kunye namadoda ebomini bethu.
Kwabantwana abadala abakwazi ukukhusela umlilo, unokwenza isithethe somlilo sokubhiyozela i-summer solstice- into enhle kubafundi abathathu kunye nentsha emva kokuba abantwana belele.
Yenza ikhandlela lelanga lokubhiyozela ilanga. UPatti Wigington
I-summer solstice, okanye uLitha, malunga nemozulu yelanga, ngoko kutheni ungazami ezinye iiprojekthi eziphathelene nelanga?
Ngolonwabo olululwazi, yakha i-sundial kwireva lakho ukuze ubone ukuba abantwana bakho bangayisebenzisa ukuxelela ixesha. Konke okufunayo kukho ezinye iindonga kunye nentonga eqinile.
Yenza ivili elangeni ngaphandle kweentonga ezine kunye nentambo ephuzi kunye neengubo, ukukhangela amehlo oothixo ngemibala ekhanyayo ilanga , okanye uqoke i-sunflowers kwaye wenze ikhandlela yokuhlobisa itafile yakho. Kaninzi "
Ngena kumyezo eLitha !. Emma Kim / Cultura / Getty Izithombe
Ukulungiswa komsebenzi ngumsebenzi omkhulu kubantwana, kwaye ngexesha lehlobo, zonke ezo imbewu ozihlanyele ngaseBeltane kufuneka zikhule ngokunyanisekileyo. Ukuba unokwanda kokutya, ezinye zazo zilungele i-Litha-strawberries zidla ngokugqithisa ngokupheleleyo, kwaye kunjalo ke imifuno yakho enamagqabi efana ne-kale kunye nesipinashi kunye ne-lettuce. Fundisa abantwaba bakho indlela yokuvuna ukutya abaya kudla.
Abantwana abakhulileyo bangasetyenziselwa usebenze ukhula kunye nokujikeleza izityalo zenu, kwaye banokuboniswa indlela yokuchonga iintlobo ezahlukeneyo zemifuno oyitshalileyo. Ukuba izityalo zakho zikhule ngokwaneleyo ukuvuna izifrigi ezimbalwa apha naphandle , bonise abantwana bakho indlela yokuzithabatha kunye nokuzixhoma ukuze zome.
Awunayo indawo yomyezo? Musa ukukhathazeka, usenako ukutshala izinto kwiingxowa. Kukho izilwanyana ezininzi ezikhula kakuhle kwiingxowa! Nika ingane ngayinye ibhodlo lakhe, kwaye uyibeke ephethe isityalo. Nangona iLitha iiveki ezimbalwa ezedlule ixesha elihle lokulima, ukuba ufumana izithole ngoku, ziya kuba zikulungele ukukhetha emva kwexesha.
Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ube nefama elisondeleyo, khangela ukuba unokuya kutyelela emasimini, ngoko abantwana bakho banokubona apho ukutya okuninzi kuvela khona, kwaye ingaba abalimi bancike kangakanani kumjikelezo wehlabathi lendalo kumakishi ezolimo.
Phuma ngaphandle uze uhambe! Umfanekiso ngo-ELENAVAL / RooM / Getty Izithombe
Ihlobo lixesha elihle lokuba yintsana! Ukongeza ngaphezu kokuhamba ukuhamba kunye nokuhamba, kwaye u tyelela umngxuma wakho wokunisela ummandla wokubhukuda, yilexesha eligqibeleleyo leminye imisebenzi yangaphandle. Ukuba kushushu kwindawo yakho emini, cwangcisa imisebenzi yeeyure ezipholileyo zentsasa okanye kamva ngosuku ekufuphi kwelanga.
Beka umculo ozithandayo uze udonse nge-yard, okanye ubambe ingqungquthela yesigubhu. Ukongeza kwinto yokuzonwabisa (kunye nokuxinwa kwengcinezelo enkulu), idonga lesigubhu okanye umdaniso oqhelekileyo usebenza enye injongo-yokuphakamisa amandla. Ukongeza ngokwakho, abantu abaninzi baya kukutya. Mema iqela labahlobo ngaphezu kwabo, bazise ukuba kuya kuba nomculo kunye nodaniso, kwaye ubone ukuba kwenzekani. Qinisekisa ukubonelela ukuhlaziya emva koko-ukubetha kunye nokudansa kunokwenzela abanye abantu.
Awunayo abantu abanelungelo lokudanisa okanye ukugubha? Hamba ngeenxa zonke kummandla ukhangele iifutha , iibhotela, okanye ezinye iindawo zokuhlaziya ihlobo.
Iiprojekthi zeCycle Craft ze-Winter Solstice
5 Kulula ukuhlobisa iingcamango zeLammas / iLughansadh
Indlela yokuhamba ngesithuthuthu nge-Dirt
Iimfundiso ze-Olympic Discus Throw Rules
Amahlaya kaSara Palin
Indlela yokulandelela i-Ancestors yakho yama-Military yase-US
I-NHL iVimise ama-Free Agents
I-Solubility Definition (uKhemistry)
Glacier Igalari yezithombe